FOIBE METM Mpanakorontana sy mpanalabaraka fiangonana, hoy Rakotobe Andriamaro
Nivoaka tamin’ny fahanginana omaly ny teraky ny mpitandrina Rakotobe Andriamaro, filoha mpanorina ny fiangonana MET tamin’izany fotoana manoloana ny fanakatonan’ny prefet tamin’ny alalan’ny foibe ny fiangonana METM Zoara Famonjena etsy Antohomadinika, izay renin’ny fiangonana METM manerana ny Nosy.
Nandritry ny lahateny nataony taorian’ny fametrahana azy tamin’ny toerany no nanambaran’ny filohan’ny Fiangonana Loterana Malagasy (Flm) ny Rév. Dr. Rakotonirina David fa “tsy manao politika politisianina na hanoha antoko politika ny fiangonana fa hitondra kosa ny anjara birikiny amin’ny fampandrosoana ny Firenena. Nohariny amin’ny Fanjakana roa ny ny Fiangonana sy ny fitondram-panjakana, ka ny fiangonana tanan-kavanana, hanao izay hampivelatra ny fitiavan’Andriamanitra, ny Fanjakana kosa tanana ankavia hanao izay hisian’ny fanajana sy ny fampanajana ny lalàna. Miara-miasa hahasoa fa tsy hifampitsabaka amin’ny andraikiny avy. Nisaorany araka izany ny Fanjakana tsy mitsabaka amin’ny raharahan’ny fiangonana, fa nentanainy kosa nanaovany antso avo ny zanaky ny fiangonana izay voaantso amin’ny anjara ndraikitra samihafa mba hijoro ho vavolombelona amin’izay asa iandraiketany izay, ka tsy hitondra henatra ho amin’ny anaran’ny Fiangonana. Notolorana ny mariboninahitra “Commandeur de l’Ordre National Malagasy » ny Pasitora Rév.Dr.Rakotonirina David ary ny « Chevalier de l’Ordre National Malagasy” kosa ny an-dRamatoa Vadiny.